Hamro Yatra | » किन गाउँमा आउँदैन विकास ? किन गाउँमा आउँदैन विकास ? – Hamro Yatra
> किन गाउँमा आउँदैन विकास ?
किन गाउँमा आउँदैन विकास ?
४ चैत, भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५ मरक्यानाकी शिला चेपाङ शिक्षित हुन् । उनलाई गाउँमा विकास भएको हेर्ने तीव्र इच्छा छ ।
सडक, बिजुली, नजिकै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याएर गाउँका बालबालिका पढाउन पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको उत्कट चाहना छ । विकास टाठाबाठाले प्राप्त गर्छन् भन्ने उनको बुझाइ छ । गाउँपालिका गत आइतबार आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले भनिन्, “चेपाङगाउँमा मात्रै किन आउँदैन विकास ?”
“स्थानीय सरकारले विनियोजन गर्ने योजना र बजेटका बारेमा हामीलाई थाहा नै हुँदैन”, उनले भनिन् “हामी कम बोल्ने र कम जानेबुझेको भएर होला ?”, उनले गुनासो गरिन् । स्थानीयस्तरमा पनि समयमै सहज सूचना प्राप्त गर्न नसकेको उनले गुनासो पोखिन । शिलाजस्तै अन्य चेपाङको गुनासो उस्तै छ ।
“हामीलाई सडक चाहियो, सडकको सुविधा भए तरकारी उत्पादन गर्छौं र बेच्छौँ”, रामजी चेपाङले भने । उनले विद्यालय टाढा हुँदा बालबालिका नियमित उपस्थित हुन समस्या भएको गुनासो पोखे । कक्षा ३ सम्मका लागि बालकक्षाको व्यवस्था गाउँमै गर्नसके मात्रै बालबालिका नियमित विद्यालय जाने उनले बताए । उनले चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रका हरेक विद्यालयमा चेपाङ समुदायको शिक्षक राख्नुपर्ने माग गरे । “पहिलाभन्दा अहिले हामी धेरै बुझ्ने भइसकेका छौँ, अझै धेरै जान्न बाँकी छ”, उनले भने ।
“चेपाङ समुदायको मुख्य समस्या बालविवाह हो”, वडा सदस्य श्रेष्ठले भनिन्, “अझै पनि १५-१६ वर्षमै बच्चा जन्माउने गरिएको छ, २० वर्ष कम उमेरको जन्म र विवाह दर्ता नै हुँदैन ।” ती समुदायमा हुने बालविवाह जनप्रतिनिधिका लागि पनि चुनौतीको विषय बनेको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने चेपाङ बालबालिकाका लागि सरकारले निःशुल्क खाजाको व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन् ।
“अझै पनि चेपाङ नागरिकको अवस्था दर्दनाक छ”, इच्छाकामना गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष मोदराज सिलवालले भने, “सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाले सञ्चालन गरेको अभियान बालुवामा पानि खन्याएसरह भएको छ ।” जनचेतनाको कमी र गरिबीका कारण उनीहरु माथि उठ्न नसकेको सिलवालले बताए । “जीवनस्तर उकास्न शुरुआत आफैबाट गर्नुपर्छ, सरकार र सङ्घसंस्थाले त सहयोग मात्रै गर्ने हो”, उनले भने ।